Chine Carport Solution orinasa sy mpanamboatra | Foen
Ny FOEN Carport Solution dia mamolavola rafitra angovo azo avy amin'ny herinaratra miaraka amin'ny toerana misy ny cacant raha toa manome fialofana ho an'ny fiara.Izany dia azo ampiasaina ho toy ny biraom-piangonana mivantana ho an'ny herinaratra ho an'ny fiara elektrika izay mifandray tsara amin'ny kabinetra fiampangana.
3.T Rail mpampitohy
5. Fanohanana miaraka
6. Bolts nalevina
1.Manao tsipika konkreto toy ny nalamina
2.Install CP alohan'ny fiomanana
Foundation: Baibolabe mivaingana
Ny fampiharana marobe: Manatreha biraom-pitaterana fiara ho an'ny fiara elektrika raha mampivoatra angovo azo havaozina ho an'ny installers.
Fametrahana haingana: Voangona mialoha alohan'ny fandefasana entana, arovy ny vidin'ny asa an-tranonao
Kalitao avo: Safidio ny fitaovana mivaingana 6005-T5 sy ny SUS304. Ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana voamarina amin'ny famakainan'ny mekanika sy ireo fanandramana mihetsika statik dia misy laharana ambony indrindra eo amin'ny orinasa.
Warranty: 15years'warranty, 25 taona
1. Fametrahana mora.
Ny famolavolana matihanina dia mahatonga ireto rafitra fotovoltaic ireto hametraka mora foana. Ka io dia mamonjy ny fotoana sy ny fiasanao.
2. kalitao avo lenta.
Ny rafitra fotovoltaika rehetra ananantsika dia manana taratasy fanamarinana momba ny ROSH, CE, TUV, SGS ary ISO miaraka amin'ny fiainana 25 taona. Izahay koa dia manome ny warranty farafahakeliny 15year.
3. vidiny mifaninana.
Ny famolavolana laika dia mamonjy ireo fitaovana be dia be ary mahatonga ny vidin'ny rafitra fotovoltaik tena mifaninana.
Manome rafi-pamokarana fotovoltaika namboarina manokana ho an'ny tetikasanao izahay.
5. Fanaterana haingana
Ny fonosana fiarovana sy fanaterana haingana avy amin'ny orinasa manokana anay.
Previous: Vahaolana fambolena
Manaraka: Vahaolana roof